Waxyaabaha beddelka loogu beddelayo pdf ilaa dxf - Gofumed
Waxyaabaha beddelka loo beddeli karo pdf ilaa dxf
Disember, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk
Badanaa waxaan ka helnaa khariidadaha pdf, kuwaas oo laga soo saaray barnaamij khariidad ah, sidaa daraadeed waxaanu dooneynaa inaan u galno ArcMap ama AutoCAD. Waxay u egtahay in uu yahay pdf qaab aad uwanaagsan, kaas oo dhammaanba dhoofinta iyo hadda xitaa uu leeyahay hantiilaha georefer ee mid ka mid ah barnaamijyada khariidad caan ah ayaa sameeyay horumarinta xitaa kuwa uu isagu sameeyay.
Halkan waxaan soo bandhigi doonaa ikhtiyaar.
1 Iyadoo loo marayo barnaamijka qaabeynta sawirka
Adobe Illustrator ayaa ka shaqeyn kara arrintan, ama Nasiib darro.
Daabacaadu waa inay ka soo qaadato barnaamijka naqshadeynta, ka dibna dhoofin si loo yareeyo barnaamij kasta oo CAD / GIS ah furan karo, dabcan waa inaad fahantaa in dxf uusan haysan wax dareen ah
2 Iyadoo loo marayo AideCAD
Tani waa barnaamij taas oo beddelaysa sheekooyinka ka soo jeeda pdf ilaa format dxf
Nasiib darro, labadaba waa barnaamijyo lacag bixin ah inkastoo ay jiraan noocyo maxkamad ah oo laga qaadi karo dhaqso.
3 Xalka kale
Waxaan xusuustaa aragtida xal kale oo farsamo, laakiin hadda ma xasuusto; Waxaan ka tageynaa booska qof inuu noo sheego haddii ay jirto wax kale oo ka duwan ... markaa waxaan dhameeynaa boostada.
Midka koowaad ayaa u muuqday:
pdf si dxf Qalabka 6.5.2
Post Previous«Previous Sida loo dhigo khariidada shabakadda
Post Next Geofumadas, websaydha 4 ee aan ku talinayey maantaNext »
3 Jawaab ayaa laga bixiyay "Beddelidda beddelaadda pdf ilaa dxf"
Waad ku mahadsantahay xogta Froy, dhab ahaantii waan isku dayay, farqiga u dhexeeya nadaamka bilaashka ah iyo kan la bixiyay waa in aad ka dhigi kartid isbeddel weyn oo ku saabsan faylasha 5 ee qaybta.
Waxa kale oo ay u muuqataa xiiso leh in ay leedahay doorasho isir ah oo isweydaarsi kara oo caawin kara, waxay sidoo kale soo saareysaa sawirrada la geliyay faylka.
Dabcan, waxay ku dhici doontaa xiriirinta 0,0,0
froy isagu wuxuu leeyahay:
mid kale ... dib u eegista gabriel ortiz ayaa sidoo kale sheegey in aad sameyn kartid habkaas ka soo baxa iskuduwaha isku-dhiska (tani waa mid caadi ah, laakiin sidoo kale bixiso) .. .. Ma garanayo laakiin waxay noqon kartaa mid xiiso leh in la ogaado tayada feylka abuuray ...... sidaas darteed waa inaad tijaabisaa ... ..
sida, kaliya in aan idin sheego in aan sameeyey diinta ka barnaamij lacag la'aan ah lagu magacaabo: PDF in DXF Converter 6.5.2, waxa wanaagsan, laakiin markii mapilla waa adag (oo leh hay'adaha badan vectorized) mashiinada waxaa sudhay iyo tani waa xaddidaadda ah, oo caqabad ku ah in waxaan helay waa habraaca loo xilsaarayo file georeference ahbaa, maxaa yeelay, sida aad faallo dxf ka maqan georeference, waxaan la isticmaalayo georeferency ku GIS ARC si kastaba ha ahaatee mararka qaarkood uma shaqeeyo iyo haddii ay tahay wax sax ah in la sameeyo, haddii ay jirto cid og yahay hab kasta oo mahad lahaa iyo sidoo kale barnaamij kale qaar ka mid ah in uusan haysan xaddidaadda ee ku deldesheen oo ... ha salaan mishiinka.
PS Waxaan raaceen aad blog ka articles marka hore in aad uploaded iyo waxaan dareemayaa dadaal aad u weyn iyo qiimo weyn, gaar ahaan kuwa ku bilaabay arrimaha GIS, aqoonsiga kartidooda iyo mahad aad kaliya ka hor aad esfuezo ....